रातदिन श्रीमानले सेक्स गरेर दुःख दिएको भन्दै लकडाउन हटाउन सरकारसंग माग - Nepalese Times
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आज कति संक्रमित थपिए ? 8 घण्टा अघि
नेपालमा फेरि अर्को न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश, आज कुन-कुन ठाउँमा पर्दैछ पानी ? 17 घण्टा अघि
प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि बोलाएर सर्वदलीय बैठक, एमालेले के गर्ला ? 1 दिन अघि
प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनबारे एमाले महासचिव पोखरेलले गरे कडा टिप्पणी, लगाए यस्ता गम्भीर आरोप 1 दिन अघि
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकियो, के- के भयो कुराकानी ? 1 दिन अघि
देउवा सरकारको ६ महिना: के- के गरे महत्वपूर्ण काम ? 1 दिन अघि
सत्ता गठबन्धनको बैठक फेरि सर्‍यो, के हो यथार्थ ? 1 दिन अघि
गगन थापाहरुले भनेर हुँदैन, कांग्रेससँगको गठबन्धन कायमै रहन्छः देव गुरुङ 1 दिन अघि
नेप्लिज संवाददाता १३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०९:३४ (1 वर्ष अघि) १५९९९ जनाले पढ़िसके
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना महामारी डरलाग्दो बन्दै गएको छ । कोरोनाभाइरसको कारण विश्वका धेरैजसो देशहरूमा लकडाउन लागू गरिएको छ । यस समयमा मानिसहरू घरहरूमा बन्द छन् । कोरोना फैलावटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यी कदम चालेका हुन् । लकडाउनको कारण मानिस दैनिक आवश्यकताका बारेमा चिन्तामा छन् । तर केही अफ्रिका लगायत देशहरूमा महिलाहरूले लकडाउनका कारण धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका समाचार बाहिर आएका छन् ।
अहिले घरमा बन्द भएकाहरु टिभी, मोबाइल, इन्टरनेट बाहेक आफ्नो यौ न जीवनको आनन्द पनि लिइरहेका छन् ।
नेपालमा अहिले ‘अभागीले विहे गरेको समयमा भुकम्प आउँछ, भाग्यमानीले गर्दा लकडाउन हुन्छ’ भनेर ब्यङ्ग्य गर्ने गरिएको छ ।
यसमा कसैले पनि आशंका गर्न सक्दैन कि मान्छेहरु आफ्नो इच्छा अनुसार हर सम्भव कायर्हहरु गरिरहेका छन् ।
तर नेपालीमा नै ‘धेरै खायो भने चीनी पनि गुलीयो हुन्छ’ भन्ने अर्को उखान पनि रहेको छ । यस्तै घटना अफ्रिकी मुलुकहरुमा पुरुषहरुले अत्याधिक यौ न चाहना राख्दा त्यहाँका महिलाहरु चिन्तामा परेका छन् ।
दिन रात आफ्ना पतिले बारम्बार गरिरहेको यस हर्कतले दुःख पाइरहेकी एउटी महिलाको पिडा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
भिडियोमा उल्लेख गरिए अनुसार लकडाउनका कारण बेरोजगार भएका उनका श्रीमान घरमा बारम्बार यौ न सम्बन्ध राख्न खोजिरहेका हुन्छन् ।
यो घटना अफ्रिकी देश घानाको हो । यहाँ आफ्ना श्रीमानका कारण तनाबमा आएकी एक महिलाले एउटा भिडियो बनाएर सरकारको अगाडि आफ्नो पीडा व्यक्त गरिन् । उक्त महिलाले घानाका राष्ट्रपति नाना अकुफो एडोजलाई लकडाउन समाप्त गर्नका लागि अपील गरेकी छिन् ।
यो भिडियो विभिन्न युट्यब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ । जसमा महिलाले लकडाउन समाप्त गर्न सरकारलाई अपील गरिरहेकी छिन । घानाका स्थानीय मिडियामा यो भिडियोलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित हुँदैछन् ।
आफ्ना श्रीमानबाट भइरहेको यस व्यवहारबाट हैरान भएकी ति महिला तत्काल उनी काममा गएको हेर्न चाहान्छिन् ।
यसकारण उनले सरकारसँग लकडाउन समाप्त पुर्ण रुपमा नभए पनि सबै कार्यालय खोल्न अपिल गरेकी छन ।
ताकि उनका श्रीमान् काममा जान सकून् र उनले त्यस्तो समस्याहरूको सामना गर्नु नपरोस् । घानाको स्थानीय मिडियामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार धेरै महिलाले आफ्नो पतिको बारेमा यस्तो खालको खुलासा गरिरहेका छन् ।
पतिले पटकपटक गरिरहेको यौ न सम्बन्धको मागबाट उनीहरु आजित भएका छन् । महिलाहरु भन्छन्, ‘धेरै यौ नसम्पर्क गर्नाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ । तर श्रीमानको माग घटिरहेको छैन ।’
ट्विटर सहित अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको एक भिडियोमा महिलाले भनिरहेकी छिन्, ‘मेरो निन्द्रा खुलेको हुँदै मेरा पति यौ नसम्बन्ध राख्न तयार भएर बसेका हुन्छन् । पहिले उसलाई सन्तुष्ट पार्छु, र भान्सामा गएर खाना पकाउछु ।
उसले खाना खान्छ, त्यसपछि टिभी हेर्छ अनी फेरि यौ न सम्पर्कको माग गर्दछ । त्यसपछि खाली यौ नसम्पर्क । फेरि यौ नसम्पर्क ।
अर्को पटक पनि यौ नसम्पर्क । के महिलाहरू लकडाउनमा यौ नसम्पर्कका लागि बसिरहेका छन् ? कि हामी वास्तवमा कोरोनाभाइरसको डरमा बन्द भएका छौं, हामी आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न लकडाउनका छौं, सही रु मेरो श्रीमान्‌ले धेरै यौ न सम्बन्ध राख्नु भएको छ । म सरकारबाट मद्दत चाहन्छु ।’
हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौ कि घानामा हालसम्म ८३४ भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ । जबकि ९ जनाको मृत्यु पनि भैसकेको छ । यहाँको सरकारले सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अप्रिलको पहिलो हप्तामा लकडाउनको घोषणा गर्यो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले उक्त महिलाको भाइरल भिडियोको उद्धृत गर्दै यो समाचार प्रकाशित गरेका छन् । अहिले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यस्लाई स्थान दिएका छन् । लकडाउनमा एक महिला आफ्नो पतिको अत्यधिक यौ न इच्छाबाट हैरान छिन् ।
पतिको हर्कतबाट ति महिलाले भनिन्,‘म मेरा पतिको अनौंठो व्यवहारबाट चिन्तित छु । ’ जानकारी अनुसार ति महिला आफुले काम गर्ने कार्यालयमा घरबाट भागिन् । त्यहाँबाट नै उनले यो भिडियो बनाएर पोस्ट गरिन् । हामी आशा गर्छौ कि उनको समस्यालाई सम्बन्धित पक्षले गम्भीरताका साथ लिएर केही कदम चाल्नेछ ।
यौ न सम्पर्कका लागि एकजना मात्रै तयार भएर हुँदैन यो २ जनाको सहमतिमा हुने कुरा हो । यसरी महिलामाथि ज बरजस्ती भइरहेको दबाबका लागि प्रशासनले तत्काल कारबाही अगाडी बढाउनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । बिएमसी नेपालबाट साभार
देउवाको सम्बोधनबारे महेश बस्नेतले गरे कडा टिप्पणी, के–के आरोप लगाए ?
माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्न यी नेता सोमबार विदेशबाट नेपाल आउँदै
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आज कति संक्रमित थपिए ?
संस्थापनइतर समूहले अन्याय गरेकोले देउवालाई सहयोग गरेको हुँ : प्रकाशमान सिंह
देशभरका अदालत बन्द गर्ने निर्णय
६‍.१ म्याग्‍निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, मानिसहरु भागाभाग
एमालेमा ठूलो पहिरो जाँदै, भीम रावल र घनश्याम भुसालले नयाँ दल खोल्दै !
रामचन्द्र पौडेलले बोलाए बैठक, कृष्ण सिटौलासहित को–को सहभागी हुँदै छन् ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी, नयाँ मन्त्रीमा प्रकाशमान सिंहसहित को-को छन् चर्चामा ?
वैशाखको चुनाव बहिष्कार गर्ने एमालेको घोषणा, प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को तनाव !
राप्रपा छाड्ने कमल थापाको घोषणा !
आज २०७८ साल माघ २ गते आइतवारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज २०७८ साल माघ १ गते शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस्
प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने देउवाको तयारी !
प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने तयारी, गृहमन्त्री खाँडलाई कुन मन्त्रालय ?
कोरोनाबाट एकैदिन नौ हजार बढीको मृत्यु, ३६ लाख बढी संक्रमित
नेपालमा फेरि अर्को न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश, आज कुन-कुन ठाउँमा पर्दैछ पानी ?
पल र समीक्षाबीचको ‘करोडको बार्गेनिङ’ छताछुल्ल, के हो वास्तविकता ?
आज २०७८ साल माघ ८ गते शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस्